လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်များတွင်လွှမ်းမိုးမှု (2018) - Your Brain On Porn
ဤနေရာတွင်အပြည့်အဝ PDF ဖိုင်ရယူရန်။
အကြံပေး: Konrad Glombik
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (IP) ပို. ပို. လူကြိုက်များဘာယနေ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်လာနေသည်။ သူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုကိုအထောက်အကူပြုသောဤသုံးစွဲနိုင်, တတ်နိုင်, အမည်မသိ (သုံးဆ "တစ်ဦးက" အင်ဂျင်) ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏လူကြိုက်များ, ဒါပေမယ့်လည်းအသစ်အဆန်းနှင့်အင်တာနက်ခေတ်မတိုင်မီလူသိများညစ်ညမ်းထံမှမရှိထပ်တူထပ်မျှသာသိပ္ပံပညာရှင်များလူ့ရဲ့ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုသုတေသနမှဆုံးဖြတ်သည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်အသက်တာ၏ဒေသများသို့ဇီဝဗေဒ, စိတ်ပညာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးမှဆက်စပ်သူတွေကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကိုအားလုံးသုံးဒေသများပြသပေမယ့်အထူးသဖြင့်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုရှုထောင့်အပေါ်အလေးပေး။ 11 - ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအနက် ICD တွင်ပါရှိသောညစ်ညမ်း၏လက်ရှိခွဲခြားဆွေးနွေးထားတယ်။ ဒါကခွဲခြား (ICD - 11) ပါဝင်ညစ်ညမ်း compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ၏အခြေအနေတွင်တစ်ဦးအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ်။ သို့သော်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခု obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) အဖြစ်စွဲကြောင့်ခွဲခြားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြသည်။ အားလုံးသုံးရွေးချယ်စရာကဒီအလုပ်အတွက်စဉ်းစားခြင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ကြပါပြီ။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကအထူးအရပျကိုစွဲလမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ညစ်ညမ်း၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ, ဒီကအခြားအပြုအမူသို့မဟုတ်သိသိသာသာစှဲဖို့ဦးနှောက်အပေါ်အိုင်ပီလှုပ်ရှားမှုတူညီပြသသောလေ့လာမှုများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စဉ်းစားသည်။ ညစ်ညမ်း၏တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုသူအပေါ်သက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ခွန်အားမရှိခြင်းကဲ့သို့သောပြဿနာများ ပို. ပို. အစွမ်းထက်ပစ္စည်းများ, အာရုံစူးစိုက်မှုမမှန်သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဆီသို့ဦးတည်မြင့်တက်ရှိပါတယ်။ လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကုန်ကူး၏ပြဿနာအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများပါဝင်သည်။ ဤလုပ်ငန်း, သို့သော်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆကျဆံ။ ယုံကြည်သူများ၏ဘဝအသက်တာ၌အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သောဝိညာဉျ, ညစ်ညမ်း၏ဧရိယာသက်ရောက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘုရားသခင်နှင့်အခြားလူများနှင့်ဆက်ဆံရေး, ဒါမှမဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ Self-ယဇျပူဇျောအပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးကိုလည်းညစ်ညမ်း၏ကြီးမြတ်သောအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါဗေဒကြည့်၏ပြဿနာပေါ်ပေါက်။
keywords: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; ညစ်ညမ်း; ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု; neuroscience; စွဲ; ခံစားချက်; PIED (ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသွေးဆောင်-Erectile အလုပ်မဖြစ်); relationship အရည်အသွေး; ယာနျဘာသာတရားကို; ကငျြ့တရား။